Tag: fampiharana voafaritra rindrambaiko | Martech Zone
Tag: fampiharana voafaritra rindrambaiko
Alakamisy, Desambra 11, 2014 Alakamisy, Desambra 11, 2014 Douglas Karr
Rehefa miresaka amin'ireo mpiasa tanora aho izao dia manaitra ny eritreritra fa tsy tadidin'izy ireo ny andro tsy nanaovantsika Internet. Ny sasany aza tsy mahatadidy fotoana iray nefa tsy manana smartphone. Ny fahitan'izy ireo ny teknolojia dia ny hoe mitohy mandroso. Efa am-polony taona maro izay izahay no niaina tamin'ny fandrosoan'ny teknolojia… saingy tsy izany intsony no izy. Tadidiko fa niasa tamin'ny taona 1, 5 taona ary 10 taona aho